လုဒိ၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း | The Conversion of Lydia | Real Conversion
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နိူဝင်ဘာ၂၀ရက်နေ့၊ လောအိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊သခင်ဘုရားနေ့၊နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းဝေး၌ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, November 20, 2011
“ထိုအခါနီမောင်းသော အထည်အလိတ်ကို ရောင်းသောသွာတိရဲမြို့သူတစ်ယောက် သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍ ၊တရားနာစဉ်တွင် ပေါလုဟောပြော သောအရာကို မှီဝဲဆက်ကပ်စေခြင်းငှါ သူ၏စိတ်နှလုံးကို သခင်ဘုရားဖွင့်တော်၏”
သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် ရှေ့ကျသော မည်သည့်စာအုပ်နှင့် မှမတူပဲ တမူထူးခြားနေသည်။ ထူးခြား ချက်တစ်ခုကို ပြောရရင် သမ္မာကျမ်းစာ၌ အမျိုးသမီးများသည် အဓိကကဏ္ဌ၌ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနေသည်။ ဧ၀၊စာရာ၊ရေဗက္ဏ၊ရာခေလ၊လေအာ၊ရုသ၊ဧသတာ နှင့် အခြားသောအမျိုးသမီးတို့သည် ဓမဟောင်းကျမ်းစာမျက်နှာ၌ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ရုသနှင့် ဧသတာဝတ္တုဤကျမ်းနှစ်ကျမ်း သည် ဓမ္မာဟောင်းကျမ်းထဲက အမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖော်ပြရေးသားသော ကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ လည်းအမျိုးသမီးများသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ခ ပါဝင်ပက်သတ်မှု ရှိနေ သည်။ကျွန်ပ်တို့ ခရစ်တော်ဘုရား၏သာသနာကို ဖတ်ကြည့်ပါက မယ်တော်မာရိ ၊မာဂဒလမာရိ၊ မာသနှင့်မာရိ၊ အမှားပြုစဉ်တွင် ဖမ်းမိသောအမျိုးသမီး၊ စာတန်မာနတ်ကခါးကုန်းစေသော အမျိုးသမီး၊သွေးသွန်သော အမျိုးသမီး၊နှင့်အခြားသောအမျိုးသမီး များကိုတွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု သည်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဖြစ်၍ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ အလောင်းမရှိသည်ကို ပထမဆုံး သွားရောက်ခဲ့ သူများသည်လည်း အမျိုးသမီးများပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ပြစ်ကိလ နှင့် သူ၏ခင်ပွန်းအာကုလ နှစ်ယောက်စလုံးကို ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် သူ့၏သာသနာ ခရီးတလျှောက် ပါဝင်ပါတ်သက်မှုကိုရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။ပြစ်ကိလကို သူ၏ခင်ပွန်းအာကုလထက်အရင်ရေး သားဖော်ပြခြင်းခံရသည် ပထမရာစုနှစ်အတွက် ထုံးစံနှင့် ကွဲလွဲသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့၏။ထို အရာကို သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများသည် ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး၌ အရေးပါမှုပေါ်လွင်ခြင်းသည် ကျွန်ပ်တို့ အတွက် အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါ၊လုဒိ ဟူသောဥရောပတိုက်သူ အမျိုးသမီးတဦးသည် ပထမဦးဆုံး ပြောင်းလဲသူအဖြစ် ကျမ်းစာ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သူ၏ အသက်တာအသစ်၌ ပြောင်းလဲ ခြင်းက အမျိုးသားများခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ အဖြစ်ပြောင်းလဲလာဖို့ လက်တွေ့ကျသော အတုယူ ဖွယ်တခုဖြစ်နေပါသည်။
၁။ ပထမ၊ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာဂရုဏာတော်ကလုဒိ၏ အသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ မစကူညီပေးပါသည်။
ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာ၊ဂရုဏာဟူသည်”ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာပေါ် ဖြစ်ပျက်နေသမျှ အပေါ်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်းပါဝင်ပါတ်သက်မှု ရှိနေဆဲ” ဟူ၍ ဒေါက်တာဟင်နရီစီ .တီဆန်က အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုသည်။ «ကမ္ဘာပေါ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ» (Henry C. Thiessen, Ph.D., Introductory Lectures in Systematic Theology, (Eerdmans Publishing Company, 1949 edition, p. 177). .ရောမဩဝါဒစာ ၈း၂၈သည် ကြီးမားသော ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာခရုဏာတော်ကို ဖေါ်ကျူးထားပါသည်။
“ဘုရားသခင်ကို ချစ်သော သူတည်းဟူသော ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော် မူသောသူတို့ ၏ အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည် တညီတညွတ်တည်းပြု စုကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏(ရောမ၈း၂၈)။
လုဒိ၏ အသက်တာ၌ မည်သို့မည်ပုံ ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာဂရုဏာတော် သက်ရောက်နေသည်ကို သိမှတ်ထားပါ။သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အရှိပြည်ရောမသို့ ရှင်ပေါလုခရီးစဉ်ကို တားမြစ် ခဲ့သည်။ (တမန်၁၆း၆)။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဗိသုန်ပြည်သို့ ခရီးစဉ်ကို လည်းတားမြစ်ခဲ့ သည်(တမန်၁၆း၇)။ ဘုရားရှင်သည် ရှင်ပေါလုအား အိပ်မက်ရူပါရုံကို မြင်စေ၍ မာကေဒေါနိပြည် ဂရိနိုင်ငံသို့ သွားစေခဲ့၏(တမန်၁၆း၉)။
“ဗျာဒိတ်တော်ရူပါရုံကို မြင်ရလျှင် ၊မာကေဒေါနိပြည်၌ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟော စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ခေါ်တော်မူသည်ဟု ငါတို့သဘောကျ ဖြင့်၊ထိုပြည်သို့သွားစေခြင်းငှါ ချက်ချင်းရှာကြံကြ၏(တမန်၁၆း၁၀)။
“ဥပုဒ်နေ့၌ ငါတို့သည် မြို့ပြင်သို့ထွက်လျှင်၊ပ၎ာနာဇရပ်ရှိ တတ်ရာမြစ်နား သို့ သွား၍ ထိုင်ပြီးမှ ၊ထိုအရပ်၌ စည်းဝေးသော မိန်းမတို့အား ဟောပြောကြ၏၊ထိုအ ခါနီမောင်းသော မထည်အလိတ်ကို ရောင်းသော သွာတိရဲမြို့သူ လုဒိအမည်ရှိသော မိန်းမတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော သူဖြစ်၍ ၊တရားနာစဉ်တွင် ပေါလုဟောပြောသော အရာကို မှီဝဲဆည်းကပ်စေခြင်းငှါ သူ၏စိတ်နှလုံးကို သခင် ဘုရားဖွင့်တော်မူ၏(တမန်၁၆း၁၃-၁၄)။
လုဒိသည် မာကောဒေါနိပြည်သူ တစ်ဦးမဟုတ်ပါ၊ သူသည် အရှတိုက် သွာရဲမြို့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါ သည်။သူသည် ရှင်ပေါလုနေထိုင်သော အာရှတိုက်သူဖြစ်ပြီး ၊ဝေးလံသော မာကေဒေါနိပြည်၊ ဖိလိပ္ပိ သို့ခရီးသွားနေသူပါ။ ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရှင်ပေါလုမတိုင်ခင် လုဒိသည် ထိုနေရာသို့ ရောက်နှင့်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။တခါမှမရောက်ဖူးသော နေရာဒေသ၌ သတင်းကောင်းကို ကြား နာပြီး အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ သနားခြင်းဂရုဏာတော် သည် ထိုကဲ့ သို့ လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိပေသည်။
ဤသည်သင့်အသက်တာအတွက် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်နည်း?
ပထမအနေဖြင့် အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာသော မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မဆိုထိုကဲ့သို့ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်က လုပ်ဆောင်နေသည်ကို သိစေလိုပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့အသင်းတော်၌ ရှိယုံကြည်သူတိုင်း လိုလိုပင် ထိုကဲ့သို့ဘုရားကျေးဇူးတော်က လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒေါက်တာ ကေကန်နှင့် မစ္ဓတာကွန်းစ်မှလွဲ၍ ကျန်အယောက်စီတိုင်းက ထိုသို့ ဘုရားကျေးဇူးတော် ဖြင့် ပြောင်းလဲနေသည်ကို ကျွန်ပ်သိပါသည်။ ဤအသင်းတော်သို့အစ သင်မည်ကဲ့သို့ရောက် လာပြီး ပြောင်းလဲနေသည်ကို ပြန်စဉ်းစားတွေးကြည့် စေလိုပါသည်။ မည်သို့မည်ပုံ သင်သည် အသက်တာသစ်၌ ပြောင်းလဲရခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာသို့ မိတ်ဆွေမတော်တဆ ရောက်လာလို့တော့ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က သင့်အသက်တာ တခုလုံး အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲလာဖို့ နှင့်ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းနားထောင်ဖို့ တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ကံကြမ္မာ အခွင့် ထူးကြောင့် ဤနေရာသို့ ရောက်ရှိလာသူ မဟုတ်ကြပါဘူး။
ဤ်အသင်းတော်နေရာသို့ ရောက်ရှိလာဖို့ တစုံတစ်ယောက်က သင့်အားဖိတ် ခေါ်ခြင်း ခံရသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ရှိပါသလား? ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်ပေးပါ။ ဤသည်လည်း သင့်အဖို့ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်အား ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသူ ဖြစ်ပါကလည်း သင်သည် ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သာခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ တက်ရောက်သူဟူသမျှသည် ဘုရားသခင့်ကျေး ဇူးတော်ကို ခံရကြသော သူများဖြစ်သည်။ ဤနေရာသို့ သင်ရောက်ရှိလာဖို့ ဘုရားရှင်၏ အစီစဉ် တစ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဒီမနက်သင်ဒီနေရာကို ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သော လုဒိအကြောင်း ကျွန်ပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
၂။ ဒုတိယ၊လုဒိသည် သူ့အသက်တာသစ်တဖန် ပြောင်းလဲလာဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
“ထိုအခါနီမောင်းသော အထည်အလိတ်ကို ရောင်းသောသွာတိရဲမြို့သူတစ်ယောက် သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍ ၊တရားနာစဉ်တွင် ပေါလုဟောပြော သောအရာကို မှီဝဲဆက်ကပ်စေခြင်းငှါ သူ၏စိတ်နှလုံးကို သခင်ဘုရားဖွင့်တော်၏” (တမန်တော် ၁၆း၁၄)။
လုဒိသည် တပါးအမျိုးသားမှ ယုဒဘာသာသို့ သက်ဝင်ယုံကြည်လာသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ယုဒအမျိုးသမီးတချို့ သူတို့နှင့် ဆုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုရန် မြစ်နားသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ဥပုဒ်နေ့တွင် ထိုနေရာ၌ တရားဇရပ် မတွေ့သဖြင့် ဆုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုရန် မြစ်နားသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရှင်ပေါလုနှင့် အပေါင်းအသင်းများက ထိုအမျိုးသမီး အဖွဲ့အား ဧဝံဂေလိတရားဝေငှခဲ့သည်။” တရားနာစဉ်”တွင်ဟူ၍ ကျမ်းစာတော်၌ရေးသားဖော် ပြထားပါသည်။
အချို့သော မယုံကြည်သူတို့က ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သော နည်းမရှိ “ဟူ၍ပြောကြားသည်။ အများကြီးမှားတာပါပဲ၊ကျွန်ပ်၏ တရားဒေတနာတော်ကို နားထောင်စမ်းပါ! တနင်္ဂနွေနံနက် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးနှင့် တနင်္ဂနွေည၌ တရားဒေသနာ နားထောင်ဖို့ ကြွရောက် လှမ်းလာခဲ့ပါ! လုဒိသည် ရှင်ပေါလုနှင့် ရှင်လုကာတို့၏ တရားဒေတနာတော်ကြောင့်f အသက်တာပြောင်းလဲသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေ လည်း ကျွန်တော်တို့၏ ဟောကြားသော တရားဒေသနာ နားထောင်ဖို့ လှမ်းလာပါ! မိမိကိုယ်ကို မိမိ အသစ်ပြုပြင်၍ မရနိုင်သော် လည်း သင့်နှလုံးသားဖွင့်ထားပြီး လုဒီကဲ့သို့ တရားဒေသနာတော် ကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ဘုရားရှင်၏ သားသမီးတို့နှင့် အတူမိတ်သဟာယ ရှိလျှက် ကျွန်တော် တို့၏ တရားဒေတနာတော်ကို နားထောင်ကြည့်ပါ!
စကားမစပ်ပြောရအုံးမည်၊ အပတ်တိုင်းမိတ်ဆွေ ဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်လာပြီး တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိသော်လည်း သင့်နှလုံးက အခြားနေရာသို့ ရောက်နေတတ် သည်။ ကျွန်ပ်တို့၏ တရားဒေတနာတော်ကို နားဝင်မရှိနိုင်ပါ! ခရစ်တော်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ
“ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးကို ဝင်ခြင်းငှါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ (လုကာ၁၃း၂၄)
“စကားလုံးကို ဂရိဘာသာစကားမှ “ “ ကြိုးစားရုန်းကန်းခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ပြန်ပါ်သည်။ အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲဖို့ရန် တရားဒေတနာတော်ကို ကြိုးစား၍ နား ထောင်ရမည် ဟူ၍ဆိုလိုပါသည်။ “နောက်မှဘဲ တရားဒေတနာတော်ကို ဖတ်ပါတော့မယ်” ဟူ၍ သင်ပြောကောင်းပြောနိုင်ပေသည်။ ထိုအရာသည် တချို့တဝက် သင့်အဖို့ကောင်းချင်မှ ကောင်းမည်၊ သို့ပါသော်လည်း တရားဒေတနာတော်ကို နားထောင်ခြင်း ကသာ လူတို့၏ အသက်တာ ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မိန့်တော်မူသည်မှာ
“ သတင်းမကြား လျှင် အဘယ်သို့ ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း? ဟောပြောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ကြားနိုင်မည်နည်း?(ရောမ၁ဝး၁၄)။
တရားဒေသနာတော်ကို ကြိုးစား အားထုတ်၍ နားထောင်ပါ။ ဤသည် အပြစ်သားများ အသစ်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲလာရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟုမည်၏ လုဒိသည် တရားဒေတနာတော်ကို သေချာဂရုစိုက် နားထောင်သူဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် သူအ သက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ မိမိ၏လုပ်ဆောင်ချက် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
၃။ တတိယ၊လုဒိအသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ ရှင်ပေါလု၏ကြိုးစား၍ တိုက်တွန်းခြင်းသည် အရေးပါ ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ “ရှင်ပေါလုဟောပြောသောအရာကို မှီဝဲဆည်းကပ်စေခြင်းငှါ” (တမန်တော်၁၆း၁၄) ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ကို မှီဝဲဆည်းကပ်နားစွင့်ခြင်း (အထူး)ဟအဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုသည်။ သူမသည် “ရှင်ပေါလုဟောကြားသောအရာကို” မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်းနားစွင့်ခြင်းပြုခဲ့သည်။ လုဒိအသက်တာထဲ ရှင်ပေါလု၏ တစ်စိတ်တဒေသပါဝင်ခြင်းဆိုရာတွင် တရားဒေသနာတော်ကို သူမအား ဟောကြားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဟောကြားခဲ့ပါသနည်း? ခရစ်တော်ဘုရား၏ သတင်းကောင်းကို စာရေးဆရာ လုကာရေးသားဖေါ်ပြသည်မှာ၊ “ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောစေခြင်းငှါသခင်ဘုရားသည် ငါတို့ကို ခေါ်တော်မူသည်” (တမန်တော်၆း၁၀)ဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ရှင်ပေါလု၏ ဩဝါဒစာ၌ အခြားသောဆုံးမဩဝါဒများကို ဟောကြားခဲ့သော်လည်း အဓိကအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို သာ ဟောကြားခဲ့သူသာ ဖြစ်သည်။ ကောရိန္တုဩဝါဒစာ၌၊
“ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါသည်သင်တို့အား ဟောပြောဘူးသည်နှင့်အညီ၊ သင်တို့သည် ခံယူ၍မှီသဲဆည်းကပ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို သင်တို့အား တဖန်ငါကြား လိုက်၏။ အထက်ကငါဟောပြောသည်အ ကြောင်းများကို သင်တို့သည် အကျိုးမဲ့မယုံဘဲ စိတ်စွဲလမ်းလျှင်၊ ထိုဧဝံဂေလိ တရားအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်း သင်တို့အားရှေ့ဦးစွာ အပ်ပေးသောအကြောင်း အရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည် အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။ (၁ကော၁၅း၁-၄)
အချို့သောနေရာဒေသ၌ ရှင်ပေါလုသည် ခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းကို ဟောပြောတော်မူခဲ့သည်(၁ကော၁း၂၃)။တကြိမ်တခါတုန်းကရှင်ပေါလုပြောကြားခဲ့သည်”အကြောင်းမူကား ယေရူခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံတော်သော သခင်မှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင် ငါမသိလိုဟု ငါစိတ်ပြဋ္ဌါန်းခြင်းရှိ၏(၁ကော ၂း၂)
အို!တရားဟောဆရာများ ဤအဓိကျသော ခရစ်တော်ဘုရား ကိုယ်စားအသေခံခြင်းမှ ခန္တာကိုယ်အားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ဟောကြားဝေငှကြပါစို့လား။ ခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင်ပေါ် ကိုယ်စားအသေခံပေးပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို တမန်တော်များက သံသယကင်းရှင်းစွာ လုဒိကို ဝေငှဟောကြားခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ် များအဖို့သင့်လျှော် မှန်ကန်မှုမရှိသော “ချမ်းသာကြွယ်၀ခြင်း” နှင့်ပတ်သက်၍ တရားဒေသနာတော် ဟောကြားခြင်း၊ “မည်ပုံမည်ကဲသို့” ဆိုသော သူတပါးနားကြားချမ်းသာအောင် ယနေ့တရားဟော ဆရာအများဟောကြားနေကြသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများအတွက်ရည်မှန်း၍ ဧဝံဂေလိတရားကိုသာ မဟောကြားဘဲ၊ အပြစ်သားများအား ခရစ်တော်သခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိကို ကြားနာစေရန်လိုအပ်သည်။ “ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများအတွက် မည်ကဲ့သို့ဟောပြောရမည်နည်း?” ဟူ၍ တစုံတဦးကပြော ကောင်းပြောမည်။ သူတို့ကို တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နားထောင်စေပါ။ ဓမ္မသီချင်းဟောင်း၌ သီကုံးထားသကဲ့သို့ “ပြောရန်ဝတ္တုရှိ” ဆိုထားသကဲ့သို့ ဧဝံဂေလိတရားကို တိတိကျကျနားလည် သဘောပေါက်သည်သာမက ဆာလောင်မွတ်သိပ်သော စိတ်ဝိညဉ်အားဖြင့် ကျန်သောတရားစကားကို နားထောင်စေရန် နိူ့ဆော်ပေးခြင်းဖြစ်မည်။ အကယ်၍ ဝိညဉ်ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေပါက တနင်္ဂနွေညနေ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ခရစ်ယာန်၌ ယုံကြည်သူတို့အဖို့ တိုက်ရိုက် တရားဟောကြားသော တရားဒေသနာကို နားထောင်စေပါ။ အကယ်၍ တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုအစည်းအ ဝေးသို့ မရောက်ရှိလာပါက၊ သင်သည်အရှက်ကျပေမည်! Lငဘနမal သမားတို့၏ လမ်းအတိုင်းလျှေက် လှမ်းနေသူဖြစ်မည်! ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေးသို့ လှမ်းလာခဲ့ပါ၊ လူအနည်းစုဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်ကြရအောင်၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူနှင့် ခရစ်ယာန်အသင်းဝင်သူ^သားများ အသင်းတော်၌ တိုးပွားများလာဖို့ ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ တရားဟောကြပါစို့။ တရားဟောမင်းသားကြီး စပါဂျန်က တမန်တော်ပေါလု၏ အကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ဘာသာရပ် တစ်ခုတည်းဖြစ်သော၊ လက်ဝါးကားတိုင် ပေါ်ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်း သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော်ဖြင့် လူအပေါင်းတို့အား ဘုရားသခင် ထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိသည်၊ အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်သားများကို ဆေး ကြောပေးပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့တိုင်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်း ကိုပေးနေသည်။ ယနေ့တိုင် ကောင်းကင်ဘုံတွင် အပြစ်သားများအဖို့ ကြားဝင်ပြန်ဖြေပေးနေပါသည်။ “သခင်ကို ယုံကြည်အားကိုးပါ။သခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးပါ” ဟူ၍ စဉ်ဆက် မပြတ် ပေါလုဟော ကြားခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့သည် ထာ၀ရအသက်ကို ရရှိ ကြသည်ဟူ၍ ဟောကြားသက်သေခံခဲ့သည် (C. H. Spurgeon, “Lydia, the First European Convert,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, volume 37, p. 488).
သင့်အစား ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်အမျက်တော်မှ သင့်အားကယ်တင်ခြင်း သန်းရှင်း သော အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပြီးဟူသော ဧဝံဂေလိသတင်း စကားကို သင်နားထောင်ဖို့ လိုအပ်သည်။ သင့်အား ထာ၀ရအသက်ပေးဖို့ သေခြင်းမှ မပုပ်စပ် နိုင်သော ခန္တာကိုယ်အသွေးအသားအားဖြင့် ထမြောက်ပြီးဖြစ်သည်။ သခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံ အဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ စံပယ်တော်မူပြီ။ သင့်အပြစ်များကို အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ ယေရှုခရစ်တော်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ! ဤတရားကို ပေါလုသည် လုဒိအား ဟောကြားခဲ့သည်။ ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းကျွန်ပ်လည်း မိတ်ဆွေတို့အား ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ငါတို့သခင်ယေရှု၏ လက်ဝါးကားတိုင်တော်မှတပါး အဘယ်အရာ၌ မျှဂုဏ်ယူဝါကြွားခြင်း မရှိပါစေနဲ့”(ဂလာ၆း၁၄)။ ကျွန်ပ်တို့၏ အဓိက သော့ချက်တရားဒေတနာသည် ခရစ်တော်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသေခံခြင်း၊ ကျွန်ပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံခြင်း၊ ကျွန်တို့ ၏အပြစ်အခအတွက် ပေးဆပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစသော တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ကို အဓိကထားဟော ကြားရပါမည်။ ရှင်ပေါလု၏တရားဒေသနာကို လုဒိနားထောင်၍ ဘုရားသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ် သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြပါစို့! ဤသည် လုဒိအသက်တာ၌ ပေါလု၏ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချက် တစ်စိတ်တဒေသပင် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါရန် လုဒိအား ရှင်ပေါလုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။
၄။ စတုတ္ထ၊ လုဒိအသက်တာ ပြောင်းလဲလာဖို့ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ပါဝင်ပါတ်သတ်မှု ရှိသည်။
နုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်မှာ “သူ၏စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ဖွင့်တော်မူ၏” (တမန်၁၆း၁၄)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် လုဒိနှစ်ယောက်ကို ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်က ပို့ဆောင် သနားတော်မူ၍ ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလု၏ ဟောကြားချက်များကို လုဒိသည် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ နားထောင်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိ တရားကိုသာ ရှင်ပေါလုသည် လုဒိအား ဟောကြားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်က သူ၏စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်ပေးထားသည်ဟု ကျွန်ပ်တို့ နားလည် ရပါသည်။
ဘုရားရှင်ကလုဒိ၏ စိတ်နှလုံးသားကို ဖွင့်ပေးသောကြောင့် သူသည်ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ လူတော်တော်များများက ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို နားမလည်ဖြစ်နေကြသည်ကို ကျွန်ပ်အံ့ဩ၍ မဆုံးဖြစ်နေသည်။ စာတန်မာန်နတ်က သူတို့၏ စိတ်နှလုံးကို မည်းမှောင်စေသောကြောင့် ဖြစ်ပါမည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်ပေါလုက
“ငါတို့ဟောပြောသော ဧဝံဂလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိလျှင် ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သော သူ အားသာ ဖုံးအုပ်လျှက်ရှိ၏။ ထိုသို့ မယုံကြည်သောသူတို့ကား ၊ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော် တည်းဟူသောခရစ်တော်၏ ဘုန်းအသရေနှင့် ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား၏ အရောင်သည် အလင်းကို မပေးစေခြင်းငှါ၊ ဤလောကကို အစိုးရသော ဘုရားသည် သူတို့၏ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေ၏” (၂ကော၄း၃-၄)။
စာတန်သည် “လောကီမှောင်မိုက်ကို အစိုးတရပြုသောဘုရား” ဖြစ်သည်။ သူသည် သင်၏ စိတ်နှလုံး သားကို မိုက်မဲစေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်သင်သည် ယေရှုဘုရားက အပြစ်အတွက် အသေခံပေး ခြင်းကို သိနားလည်ဖို့ အသိမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့ အသေအချာ ပြောနိုင်သည်မှာ “ထိုအမှုသည် ထာ၀ရဘုရား ပြုတော်မူသော အမှုဖြစ်၏ ငါတို့ မျက်မှောက်၌လည်း အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏” (ဆာလံ၁၁၈း၂၃)၌ ဖော်ပြထားသည်။ ရှင်ပေါလုက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ
“မှောင်မိုက်ထဲက အလင်းထွန်းလင်းမည်အကြောင်း မိန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ၊ ယေရှုခရစ်၏ မျက်နှာ၌ ထွန်းလင်းသော ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကိုသိသော ဥာဏ်၏ အရောင်ကို ပေးလိုသောငှါ၊ ငါတို့စိတ်နှလုံး၌ လင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏” (၂ကော၄း၆)
လုဒိ၏ စိတ်နှလုံးသားသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နားလည်သည်သာမကပဲ ၊ခရစ်တော် ဘုရားသခင်ကို မြင်တွေ့သည့်အထိ သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ပါသည်။ “ကျွန်မ၏ အပြစ်အတွက်အသေခံပြီးဖြစ်၍ အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်မှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကို ခံရပြီဖြစ်သဖြင့် ကျွန်မသည်သခင့်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်မည်ဟူ၍ တွေးတောခဲ့သည်။ “ ကျွန်မသည်အသက်တာထဲ၌ ခရစ်တော်သခင်ကို ယခုပင် အလိုရှိသည်” ထိုကဲ့သို့ တွေးတောစဉ်းစားစဉ် ခဏအတွင်း သူသည် ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီး ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ဒီကနေ့ ဤနေရာ၌ ရောက်ရှိလာကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည်လည်း ရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်ပ်ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ “သခင်သည် သင့်အားကယ်တင်ပါစေ၊ သခင်သည်သင့်အားကယ်တင်ပါစေ၊ အခုပင် သခင်သင့်အား ကယ်တင်ပါစေ” အာမင်! ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက်သီချင်းနံပါတ်(၄)ကိုသီဆို ကြပါစို့!
- ပြစ်နှိပ်စက်ခြင်းခံသူတိုင်းလာ၊ ကိုယ်တော်ဂရုဏာရှိ
မိန့်တော်မြတ်ကို ယုံကြည်မူလျှင်၊ ငြိမ်းခြင်းအမှန်ရမည်
ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်ပါ၊ ယခုယုံကြည်ပါ။
သင်၏ အပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်၊ ယခုကယ်ချွတ်မည်
မိုးပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူအောင် ဆေးလေ၊ သွေးတော်၌ နှစ်မြှပ်ပါ
ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်ပါ ယခုယုံကြည်ပါ
သင်၏အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည် ယခုကယ်ချွတ်မည်
ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ဆိုင်းမနေ၊ သင်သည်မင်္ဂလာရှိ
(၁၈၁၃-၁၈၇၇ ခုနှစ်၊ ဂျွန်.အိပ်ခ်ျ.စတောတ်တန် သီကုံးရေးသားသော ကိုးစားယုံကြည် ပါကျူး)
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတ်တန် အယ်လ်.ချန်မှ တမန်တော်၁၆း၆-၁၅အထိကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္ဓစ်တာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်.ဂရိဖက်စ်မှ
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ဂျွန် အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “အိုမခန်းခြောက်သော စမ်းရေတွင်း”
"ထိုအခါနီမောင်းသော အထည်အလိတ်ကို ရောင်းသောသွာတိရဲမြို့သူတစ်ယောက် သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍ ၊တရားနာစဉ်တွင် ပေါလုဟောပြော သောအရာကို မှီဝဲဆက်ကပ်စေခြင်းငှါ သူ၏စိတ်နှလုံးကို သခင်ဘုရားဖွင့်တော်၏" (တမန်တော် ၁၆း၁၄)။
၁။ ပထမ၊ ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာခရုဏာတော်က လုဒိအသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ မစကူညီပေးပါသည် ရောမ ၈း၂၈ ^တမန်တော် ၁၆း၆’ ၇’ ၉’ ၁၀’ ၁၃-၁၄
၂။ ဒုတိယ၊ လုဒိသည် သူ့အသက်တာ အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲလာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
လုကာ ၁၃း၂၄၊ ရောမ၁၀-၁၄
၃။ တတိယ၊လုဒိအသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ ရှင်ပေါလု၏ ကြိုးစား၍ တိုက်သွန်းခြင်းသည် အရေးပါခဲ့သည်။ တမန် ၁၆း၁၀၊ ၁ကော၁၅း၁-၄၊၁း၂၃၊၂း၂၊ ဂလာ၆း၁၄
၄။ စတုတ္ထ၊ လုဒိအသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ပါဝင်ပါတ်သတ်မှု ရှိသည်။ ၂ကော၄း၃-၄၊ ဆာလံ၁၁၈း၂၃၊ ၂ကော၄း၆၊